Sọpụrụ ụlọ ọrụ
Otu Ihe Ngosi
White gwakọtara Alumina
Monocrystalline gwakọtara Alumina
Production Onodi & Production Line
Nyocha & Mmepe
YUFA Ga-aga 30th Anniversary Refractory Industry Development Forum nke Association
site ha na 21-03-13
30th Anniversary Refractory Industry Development Forum nke Association (Nke Abụọ) ga-enwe site na Association nke China Refractories Industry (ACRI) na Machị 31-Eprel 2, 2021 na Luoyang, mpaghara Henan. N'oge ogbako ahụ, anyị ga-enyocha mmepe ahụ nke refractory ụlọ ọrụ na ...
Ọhụụ YUFA Maka Ọdịnihu
site ha na 21-02-26
Ọzọ, YUFA na-ezube iwu ọkụ ọkụ eletrik abụọ (osisi Ruzhou), nke nwere ike ịbawanye ikike mmepụta nke corundum site na tọn 20,000; Zhengzhou YUFA Fera seramiiki Technology Co., Ltd. na-ezube ịgbakwunye ọkụ ọkụ ọkụ ọhụrụ iji bulie ikike nke alumina calcined site na tọn 20,000. Pụtara ...
2021 National Refractory Materials Ọmụmụ Exchange Conference
site ha na 21-01-26
Zhengzhou YUFA Abrasives (Group) Co., Ltd. sonyere na nnabata "2021 National Refractory Materials Academic Exchange Conference" A na-eme atụmatụ ya na Chongqing na Mee 10-13, 2021. Na mbido Afọ Ọhụrụ nke 2021, Zhengzhou YUFA Abrasives (Group) Co., Ltd., dịka o ...
Nkwenye YUFA na nkwa nke ogo
site ha na 20-09-26
Ngwaahịa dị mma sitere na njikwa njikwa mma. YUFA Group jikọtara ịdị mkpa nke njikwa ngwaahịa n'akụkụ niile. YUFA nwere usoro nyocha zuru oke ma sie ike. YUFA chepụtara kwekọrọ ekwekọ factory egosi dị iche iche ahịa na dị iche iche na ngwaahịa na stric ...
13th Shanghai International Advanced Ceramics Exhibition
site ha na 20-08-12
Zhengzhou YUFA Fera seramiiki Technology Co., Ltd. kpọrọ ya ka International Advanced Ceramics Organisation wee sonye na 13 Shanghai International Advanced Ceramics Exhibition site na August 12th ruo August 14th. Onye isi oche nke ụlọ ọrụ ahụ, Maazị Zhang, jiri aka ya bịa na saịtị ahụ, m ...
site ha na 20-04-26
Megide coronavirus, YUFA na-agbaso usoro mgbochi mgbochi COVID-19 na iwu metụtara ya iji hụ nchekwa nke ndị ọrụ. Iji hụ na arụpụta ọrụ nkịtị, a na-anabata usoro nhazi usoro iji meghachi omume na ihe ịma aka nke nje ahụ. Companylọ ọrụ anyị ewerela ...
YUFA Ibu Ọrụ Ndị Ọrụ na Ọrụ Ndị Ọzọ
site ha na 08-12-26
White fused alumina bụ nke ngwaahịa ndị bụ isi nke China. Dị ka "ezé ụlọ ọrụ mmepụta ihe", a na-eji ya eme ihe na abrasives, ihe ndị na-enweghị ike, ihe seramiiki, kemịkal kọmputa, na-egweri ma na-egbuchasị, nkenke nkedo, ihe owuwu ụlọ, mmanụ ala, aerospace, ndị agha na ...
YUFA Abrasives Group Na-aga n'ihu Na-eduzi Nchọpụta Ngwaahịa na Mmepe
site ha na 07-08-26
Zhengzhou YUFA Abrasives Group Co., Ltd. na-ejide ọchịchọ ahụ, na-agbaso ahịa ahụ, ma nwee obi ike iji mepụta ma na-arụsi ọrụ ike na-enyocha n'okporo ụzọ nke nyocha ọhụụ na mmepe. O were ihe karịrị afọ ise iji mepụta usoro teknụzụ sodium tozuru etozu. Site na ...
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ price list, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa.